Olee otú Iji Travel Eco Enyi na Enyi Na 2020? | Save A Train
Home > Zụọnụ Ndụmọdụ > Olee otú Iji Travel Eco Enyi na Enyi Na 2020?
Eco friendly njem bụ na-ebute ụzọ uche anyị dị ka anyị na-abanye ọhụrụ a afọ iri. Na gburugburu ebe obibi na oru dị ka Robert Swan na Greta Thunberg, ozi ụwa a na-anapụta ya na crystal doo anya. Anyị na-agba si ka oge na-a na-adịgide adịgide mmetụta na planet na chekwaa ya dị oké ọnụ ahịa ego.
Change amalite taa na na anyị, mkpebi ndị anyị na-eme ka na-akwalite ọrụ njem. Dị ka anyị ghọọ ihe maara nke anyị mmetụta na gburugburu ebe obibi na adigide njem atumatu, anyị ka na-ele eco friendly njem na kwa obosara a uche. Ịrụ Ọrụ Dịịrị njem bụ agaghịkwa ihe anyị pụrụ ịhọrọ-eri na ebe a na-. Ọ bụ ihe na kwesịrị ka a chọrọ nnọọ kpara n'ime anyị kwa ụbọchị ndụ, na-aghọ nke abụọ agwa.
Nke a mma-emekarị na-eme nwayọọ nwayọọ na mmiri na ebili mmiri nile na uwa njem. Travel iche na-ewebata ike nke anyanwụ, mmiri imegharị ihe maka iji usoro e emejuputa atumatu iji belata oriri na plastic na-aghọ a mwute ojiji nke gara aga. E nwere a ukwuu zuru ụwa ọnụ ije na ịrị elu na onye na-, na olileanya na mkpebi siri ike, ga-ekwughachi ghaghị n'ọdịnihu ọgbọ nke insatiable njem. Ebe a na-anyị n'elu Atụmatụ na Olee otú Iji Travel Eco Enyi na Enyi:
Ọtụtụ njem họọrọ iji belata ha carbon akara ukwu site na-efe efe na-ma ọ bụ site ịcha si ụgbọelu njem kpamkpam, predominantly omume ndị Swedish buzzword flights Shame (ụgbọ elu ihere). Ọ bụ mba na nzuzo na ikuku njem bụ ugbu a otu n'ime ndị kasị na-eto eto nkwado na mgbanwoe. Ọ bụ ezie na-efe efe ga-enwe mgbe nile a oké mkpa ọkpụkpọ na otú anyị na-ahọrọ na njem, anyị mkpa ka e chetara na ụdị ndị ọzọ nke na-eme njem na-enye na-akpali akpali eco ememe.
Train njem nwere a nostalgic gara amara ambiance na bụ ike eco friendly njem igba. Ọ na-enye a nso nke uru gụnyere ihe legroom, na-eri nri na a ụgbọ ala erimeri mgbe ụtọ ebe mara mma, ejegharị ejegharị na ụmụaka dị mfe na ndị na-achọ ka ha anọ n'ọnụ, enweghị ọnọdụ ofufe. Train njem ewere agaghị egbu oge ka ọrụ njem.
Nwee Eco Enyi na Enyi, Nkume naanị n'akara
N'ebe ọ bụla anyị na njem, anyị ga-ahapụ naanị n'akara. Ka eco njem, anyị na-ama maara nke a. Otú ọ dị, ndị a na ọnọdụ ịkwa anyị ka anyị mee ihe, anyị nwere ike ime nke a a nzọụkwụ ọzọ. The kasị mma ihe na-ahụ bụ njem isonyere ọnụ ma na-ahapụ a na-aga nke ọma karịa anyị hụrụ ya. Ọ na-efu ihe ọ bụla na-bulie a ole na ole iberibe ahịhịa na anyị na-ahụ na a osimiri ma ọ bụ na a oké ọhịa. Ọzọkwa, ikpofu ya n'ụzọ ziri ezi pụtara na ọ na-adịghị ala elu na oké osimiri.
Rie ma ṅụọ Obodo
Kwado obodo abụghị naanị ihe eco friendly njem igba ma ọ bụ na-a obodo upliftment onyinye. Ịzụ mpaghara pụtara na ọ dịghị onye nwere ibufe ndị ngwongwo. ọbụna ihe, azụmahịa nwere ohere ọma. Ọ bụ a na mbenata carbon akara ukwu na mpaghara obodo mmeri.
Nwee A Part Of The Eco Enyi na Enyi Ihe
A na-emekarị na-aghọ a na-emekarị n'ihi na ọ Nleta akụkụ nke ụwa na-akparịta ụka. Dị ka ihe eco njem mere ka eco friendly njem ụkpụrụ, dị mkpa ka anyị na-ekere òkè na-a akụkụ nke na-agbakwụnyeghị nkọwa. Olu anyị nwere ike. Dị ka anyị na-ekwurịta okwu na ndị njem ibe nakwa ka anyị na-aga pụrụ iche na nkuku nke ụwa. Anyị kwesịrị ịna-agbasa ozi. Anyị na-edu ọ bụla ọzọ site atụ na dị ka anyị na-eme ndị a dị mkpa mgbanwe anyị ndụ na otú anyị si na-eme ka adigide njem, anyị na-akpali ndị ọzọ ime otu ihe ahụ.
Iji Public Transportation Ma ọ bụ Walk
Ọ bụ ezie na ọ pụrụ iyi unappealing na mbụ nchọpụta mkpa ka a mere na ekele nchekwa nke ọha iga na ebe, uka n'ụzọ bụ ihe eco friendly ụzọ njem gburugburu. Ọ na-eji a adi belata ego nke mmanụ ụgbọala kwa njem tụnyere a ụgbọ ala.
A ebe beckons a njem na-emikpu onwe ha n'ihe nile o nwere na-enye. E bụ n'ezie ọ dịghị ụzọ ka mma na-emekọ ihe ndị mmadụ ya, nweta omenaala ya, ma juo ya gburugburu. Inweta ọha iga eme nnọọ otú ahụ ma na-eje ije bụ ihe ọbụna mma ọzọ.
Pack Light Na eco Enyi na Enyi
Ọ bụ oké kwesịghị na mbukota ìhè bụ ntakịrị. Mbukota ìhè doro anya bụ ihe eco friendly njem ụkpụrụ anyị nile pụrụ mfe ịmụta na ya nwere a nnukwu mmetụta. The Mkpa ọkụ anyị mkpọ, na-aga n'ihu anyị ụdịdị nke njem ga-itu na a sụgharịta ka obere mmanụ ụgbọala oriri.
Ụzọ ọzọ na-egwu gị akụkụ na adigide njem bụ nwere a lee anya na njem gaa. An eco friendly njem gaa ga-iso ikekwe nke a achara atu, Ogwe ncha ntutu, na ogwe ncha kama ịsa mmiri. Obere shampoos na conditioners na reusable ikwafu-àmà tumblers. Aluminium water bottles are vital as well as a metal straw.
Nnukwu njem ọnọdụ maka 2020 na-egosi na experiential njem bụ ọhụrụ ụzọ njem. Bugharịa n'elu, it is classics. Nke a na-eme ka ụlọ maka ahụmahụ na ihe ngosi omenala, eme, na a pụrụ iche ghọta ebe.
Họrọ Suppliers enyefe Sustainable Travel.
Tụlee a Destination Mkpa of Tourism.
Ọ bụrụ na anyị na-eche banyere gburugburu ebe obibi na anyị hụrụ art njem, anyị ga-chekwaa, chebe, ma mee ka njem anyị pụta ihe ka ọ baara ụwa oke uru eco njem. Malite site ntinye akwụkwọ a ụgbọ okporo ígwè eme njem na Save A Train, taa!
Ị chọrọ Embed anyị blog post “Olee otú Iji Travel Eco Enyi na Enyi Na 2020?” na na gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftravel-eco-friendly%2F%3Flang%3Dig የሰማይ አካላት- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)